Fahfaahin kasoo baxaysa Qarax ka dhacay magaalada Muqdishu [Dhageyso]
MUQDISHU, Somalia - Fahfaahin iyo warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax miino oo saaka ka dhacay magaalada Muqdishu, ee caasumadda Somalia.
Goobjooge magaciisa ka gaabsaday ayaa GO u sheegay in qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay, taasi oo haleeshay gaari nooca raaxada ah, oo marayay inta u dhaxaysa Isgoysyada Soos iyo Ex-control Balcad.
Labo qof, oo mid uu yahay Askari katirsan Ciidamada Nabad Sugida dowladda Federaalka Somalia, ayaa ku dhaawacmay qaraxa miino, waxaana kala kala dhigay Isbitaallo ku yaalla magaalada Muqdishu.
"Aniga waxaa kamid ahaa dadkii u gurmaday dhaawacyada. Labada qof mid waa shacab waxaan geynay Isbitaalka Duurul Shifa, halka midka kale oo ah Askari katirsan NISA loo qaadey xarun caafimaad oo ku taalla Xarunta Nabad Sugida ee Habar-khadiija," ayuu yiri Goobjoogaha.
Wuxuu intaasi ku daray in Ciidamada dowladda ayaa xireen goobta uu qaraxa ka dhacay, islamarkaana ay sameeyeen howlgal, aan wali la ogeyn cida lagu soo qabtey. Ma jirto cid sheegatay Mas'uuliyada weerarka.
Saraakiisha hay'adaha amaanka dowladda wali kama aysan hadlin qaraxa maanta.
Al shabaab ayaa adeegsadata qaraxayada dhulka lagu aasi, oo ay ku weerarto gaadiidka ciidamada dowladda iyo kuwa Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM, xilliga ay marayeen wadooyinka ka baxa magaalada Muqdishu.
​Uganda oo xaqiijisay in 12 Askari looga dilay Somalia
Soomaliya 31.07.2017. 15:24
KAMPALA, Somalia - Dowladda Uganda ayaa xaqiijisay in 12 Askari looga dilay weerar ay shalay Al shabaab ku qaadey Kolonyo AMISOM kaasi oo ka dhacay Koonfurta Somalia.
Wasaaradda Gaashaandhigga Uganada ayaa War Saxaafadeed ku sheegtay in Askarta ay ku dhinteey weer ...